I-Quailway Cottage - Iphothali, AZ
Ikotishi likhanya futhi lithokomele futhi lilala ngokunethezeka 4. Inekhishi elihlome ngokuphelele (nokho alikho ihhavini, itop yesitofu nje), ibha yesiphuzo esishisayo, iwasha nesomisi, ivulandi elimboziwe elinezihlalo zangaphandle kanye ne-grill yegesi. I-Satelite TV namavidiyo ahlukahlukene emvelo ayatholakala kanye ne-inthanethi ye-Wifi.
I-Quailway Cottage iyipharadesi labathandi bemvelo. Ibekwe maphakathi ne-Peloncillo Mountains e-SW New Mexico kanye ne-Chiricahua Mountains e-SE Arizona inikeza indawo ephelele yazo zonke izinhlobo zokuhlola imvelo. Ikotishi litholakala kumahektha angama-20 wendawo yokuhlala yasogwadule futhi libonisa insada yezihlahla zezithelo nezici zamanzi ukuheha izilwane zasendle zendawo. Inqwaba yeziteshi zokuphakela izinyoni ezitholakala ngemuva kwendlwana ikunikeza indawo yangasese ukuze ubone izinhlobonhlobo zempilo yezinyoni.
I-Quailway Cottage ingaba yisiteshi esihle sabantu abajabulela izinyoni, i-herpetology, i-entomology nokunye okuningi okuhlangenwe nakho kwezilwane zasendle kuyo yonke indawo. Yaziwa futhi ngokubuka kwayo isibhakabhaka esimnyama okuyenza ibe indawo edumile yosonkanyezi.
Itholakala kalula phakathi kwemayela elingu-1 le-Sky Island Grill kanye namamayela angu-5 ukusuka e-Portal Cafe kanye namamayela angu-7 kuphela ukuya e-Coronado National Forest kanye ne-Cave Creek Canyon. Igalaji likaphethiloli eliseduze lingamakhilomitha angu-25 e-Animas, NM noma amamayela angu-30 ukuya eSan Simon, AZ. Ukukhethwa kwegrosa elincane kuyatholakala endaweni yasePortal. Izitolo ezinkulu phakathi kwamamayela angama-50-80.
Sihlala endlini enkulu kule ndawo futhi ikotishi lihlehlisiwe litholakala eqoqweni lezihlahla zikaphayini elihlinzeka ngesimo esiseceleni. Uhlangothi olungemuva lwendlwana luhlanganisa iziteshi zokudla izinyoni kanye nechibi elincane. Siyabuhlonipha ubumfihlo bezivakashi zethu ngakho-ke asikuphazamisi ngesikhathi sokuhlala kwakho. Nokho, uma unemibuzo noma izidingo, ngokuvamile sisekhaya ngakho zizwe ukhululekile ukungqongqoza emnyango wethu.
Sihlala endlini enkulu kule ndawo futhi ikotishi lihlehlisiwe litholakala eqoqweni lezihlahla zikaphayini elihlinzeka ngesimo esiseceleni. Uhlangothi olungemuva lwendlwana luhlanga…